अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’चितवनबाट आउँदो संघको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने | OnlineChautari.com
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’चितवनबाट आउँदो संघको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने
September 8, 2017 | 11:28 am
चितवन, २३ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवनबाट आउँदो संघको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने बताए । पार्टीको वीरगञ्जमा सम्पन्न सचिवालय बैठकले आफूलाई चितवनबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष दाहालले बताए । प्रेस सेन्टर चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जिल्लाको कुन क्षेत्रबाट निर्वाचनमा उठ्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेको बताए । उनले भने, “पार्टीको जिल्ला तहबाट समन्वय गरेर क्षेत्र निर्धारण हुनेछ ।” देशका फरक-फरक भूगोल र पृष्ठभूमिको उम्मेदवार बनेर अनुभव संलागेको बताउँदै उनले ती अनुभव र चितवनलाई केन्द्रीय राजनीतिमा जोड्नका लागि यहाँबाट निर्वाचन लड्न लागेको बताए। “माओवादी युद्धको उद्गमस्थल रोल्पा, राजधानी काठमाण्डौँ र तराईको प्रतिनिधित्व गर्दै सिराहाबाट यसअघि निर्वाचन लडेको थिएँ, अब आफ्नो कर्मभूमिबाट चुनाव लड्छु,” अध्यक्ष दाहालले भने । आफू चितवनबाट निर्वाचन लड्दै गर्दा यहाँको विकास र राष्ट्रिय राजनीतिमा यस जिल्लाको महत्व झल्कने उनको भनाइ थियो ।
“मेरो राजनीतिक क्षेत्र चितवन हुनु यहाँका जनताका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको छु,” अध्यक्ष दाहालले भने । प्रदेश र संघको निर्वाचनमा समेत गणतन्त्र र लोकतन्त्रका पक्षधरसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । कांग्रेस, एमाले, मधेशवादी जोसँग पनि गठबन्धन हुनसक्ने दाहालको भनाइ थियो ।
“अहिलेको समयमा सत्ता गठबन्धन काँग्रेससँग भएकाले काँग्रेससँगको तालमेललाई विशेष प्राथमिकतामा दिइएको हो,” उनले भने । शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री एक ठाउँमा भएर अहिलेसम्म भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नतर्फ लागेको अध्यक्ष दाहालले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिमचरणमा पुगेको भन्दै उनले प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने बताए ।
चितवनमा राष्ट्रियस्तरको मिडिया एकेडेमी निर्माणका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने दाहालले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । संविधानका केही प्रावधानले सधैंँ मिलिजुली सरकार बन्ने परिस्थिति रहेको भन्दै उनले संघको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली र शासकियस्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोडदिए । भूगोल नमिलेको प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।
अहिलेको वाम गठबन्धनले देशको हितमा काम गर्न नसक्ने, : संयोजक भट्टराई
चितवन, १७ मंसिर । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले वामपन्थीको लोकतान्त्रिकरण र लोकतन्त्रको प्रगतिशीलकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्…
अस्ट्रेलियाको सुख भोग त्यागी देशलाई समृद्धि बनाउने संकल्पसहित खरेल चुनावी मैदानमा
नवलपरासी, १५ मंसिर । झण्डै एक दशक अस्ट्रेलियामा रहेर पत्रकारितासहित विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्दै आएका नवलपरासीका सरोज खरेल यतिबेला चुनावी…
सम्पर्कविहीन मतदान अधिकृत सम्पर्कमा
बाजुरा, १२ मंसिर । जिल्लाको उत्तरी भेगको पाण्डवगुफा गाउँपालिका–४ स्थित मालिका मावि बाङपानीका मतदान अधिकृत प्रेमराज गिरी सम्पर्कमा आएका छन्…
काठमाण्डौँ ५ मा ईश्वर पोखरेल र डा. महतबीच भिडन्त
काठमाण्डौँ, ११ मंसिर । आसन्न निर्वाचनमा काठमाण्डौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा नेकपा (एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेल र नेपाली काँग्रेसका…
वडा परिषद्बाट पारित योजना काटिँदा गाउँपालिकामा तालाबन्दी
नयाँ शक्ति पार्टी नवलपुर जिल्ला समन्वय समिती गठन
निर्वाचन आयोगद्धारा चौबिस घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन
राष्ट्रपति सँग प्रमुख तीनदलका शीर्ष नेताको छलफल
साउन २९ गतेभित्र प्रदेश नं. २ को उम्मेदवार टुंगो लगाउन निर्देशन
मतपत्र च्यातिएपछि रोकिएको चितवनको भरतपुरमा पुनःमतदान